I-Horoscope ye-Aquarius ngonyaka we-Tiger
I-Horoscope ye-Aquarius ngoNyaka we-Tiger-ithuba elikhethekileyo lokufumana ulwazi oluncedo kubameli balo mqondiso we-zodiac.
Umsizi wenyanga: igromegranate.
Iintsuku ezikhethiweyo: 27 Meyi, 1, 10, 14 Juni.
Iintsuku ezinzima: 22, 29 Meyi, b, 12, 19 Juni.
Okuphambili kwezinto ezinomdla: ukuzonwabisa, iintlanganiso zothando, abantwana.
Uthando noThabano ngo-Aquarius
Ukususela ngomhla wama-22 ukuya ku-31 kuMeyi. NgoMeyi 21-22 ubuhlobo obusondeleyo buya kuba ngumntu wendalo wokuphela komhla wokuthandana. Nangona ukhetha intlanganiso yothando ekhaya, kwindawo ezolile kunye ekhuselekileyo. Kuza kubakho ukungqubana phakathi kwakho, kulungiswe ngokuqinisekiswa kwamalungelo akho nomzabalazo wenkokheli. Ngomhla ka-Meyi 27, umsebenzi okanye umnqweno wokunyanzelisa imiqathango yakho unokuchaphazela ubuhlobo bakho. Ukususela ngo-1 ukuya ku-10 Juni. NgoJuni 1 no-2, uya kuba nomoya omhle, kwaye oku kuya kuba nempembelelo enxulumene nolwalamano nomlingane. NgoJuni 3, qaphela kwaye ungaboni. Ukunyameka komnqweno kuya kupholisa ngoJuni 7, kwaye unokukwazi ukuxoxisana ngokukhawuleza iingxaki uze uphumelele iilwimi eziqhelekileyo. Ukususela ngomhla we-11 ukuya ku-21 kuJuni. Ixesha elihle lolwalamano olusondeleyo, imeko efanelekileyo kakhulu iya kuba ngoJuni 12. NgoJuni 15 - usuku olungileyo, abaninzi baya kukwazi ukuvumelana nentanda yakho. NgoJuni 17, uya kuba negalelo kakhulu kwisini, kwaye umhla olandelayo uza kuza ukuvumelana okude kulindeleke kwi-intimate circle.
Umhla wobuhlanga u-Aquarius. Ngokuqinisekileyo uya kuyinqoba, ukuba ukhangele ithemba, amehlo akho aya kuphazamiseka, kwaye ukunycwina kuya kunceda ukunyamezela nangona yinto enzima kakhulu. Hamba ukuhamba kwindawo ezithakazelisayo, gcina ingxoxo engapheliyo kunye nenjabulo ngexesha le ntlanganiso.
Ngeli xesha, kwimicimbi yakho yentsapho unethamsanqa kunanini ngaphambili, ngoku unokuyicombulula ngokulula zonke iingxaki eziqokelelweyo-into engazange isebenze ixesha elide iza kufikelela ekugqibeleni. Abantwana bakho baya kufuna ingqwalasela eninzi kunye namandla - kwiminyaka emibini yokuqala unokubaxhobisa ngegumbi labantwana, uchithe ixesha elide ekukhuliseni, udlala imidlalo kwaye uxoxe nabo. NgoJuni 11, kukho ukungaqondani phakathi kwakho, kodwa kungekudala umnxibelelwano uya kusekwa. Kukho umsebenzi omningi omele wenziwe kwindlu. Iintsuku ezifanelekileyo zokubhiyozela iintsapho ezinkulu kunye neendwendwe ekhaya-Juni 9 no-10. Ngo-Juni 15 no-16, ulwalamano olufudumele noluthembayo luza kusekwa kunye neqabane lakho, kwaye uya kukwazi ukuphelisa ukungaqondani.
Phumla kwi-horoscope ye-aquarius ngonyaka we-tiger
Sebenzisa ixesha lakho lokukhulula, njengoko intliziyo yakho inqwenela. Akukho zithintelo ezikhethekileyo ekuhambeni okude, kungcono ukuqala ukuhamba ngoku, kuba kwiinyanga ezizayo akuyi kuba lula ukuphuma. Kuyinto enqwenelekayo ukwenza uhambo olufutshane kunye nesiqingatha sakho sesibini.
Indawo yamandla. Thatha kunye neqabane elithembekileyo (ukunqoba ukwesaba, ukuba kunjalo) kwaye uye kwipaki yokuzonwabisa kwivili laseFerris. Qhubeka ngesibindi, uze ufike kwindawo ephakamileyo, jonga ngeenxa zonke - akunjalo, ihlabathi lihle!
Umsebenzi kunye Nemali ye-Aquarius
Kuze kube ngo-Juni 7, indima ebalulekileyo kwiimeko zakho zemali idlalwe ngabahlobo, abathandi kunye nabaxhasi. Le nyanga kukho amathemba aphezulu ekuphuhliseni ishishini lokhenketho, ukunxibelelana nabalingani bamazwe angaphandle, unokukwenza inzuzo. Mhlawumbi ngeli xesha uya kuba nomsebenzi omningi ekhaya. NgoMeyi 25-26 kuya kuba neendaba ezivuya malunga nomsebenzi wakho. NgoJuni 13 no-14 ukuzinikezela kumsebenzi oqhelekileyo-ekugqibeleni ufuna ukuphinda ubhale kwakhona imeko ebalulekileyo.
Ukuthenga inyanga. I-toaster mini, eya kukunika imvakalelo emihle rhoqo ekuseni.
Uthando ngo-Aquarius. Ngoku ukuthanda kwakhe kuza kuqala, uyayithanda inkampani yakho. Kude ngo-Juni 7, ndikulungele ukuphakamisa imibuzo ebalulekileyo kwincoko. Yizilumko, musa ukuthatha intliziyo yakhe entliziyweni. Emva kolu suku usondlo lusebenzayo-kwaye uya kubonisa yonke into enako ukuyenza!
Ithoni ye-Aquarius. Ukuphumla ekhaya, ukulala kakuhle nokutya okufanelekileyo kuya kuzuza. Kubalulekile ukubeka ingqalelo kwiingxaki eziqokelelweyo, ukuzisa ibhizinisi ekupheleni. NgoMeyi, kuya kubakho ubunzima kwimpilo, ngoko imeko iya kubuya yesiqhelo. NgoJuni 13-14, kubalulekile ukuqinisa amanyathelo okukhusela.
Imali ye-Aquarius. Kuze kube ngo-Juni 7, sebenzisa uncedo lwabahlobo kunye nabathengisi. Ingozi yemali ayikhuthazwa ngoMeyi kunye neveki yokuqala kaJuni, ngokukodwa ngoMeyi 21 noJuni 17. NgoJuni 4-5, unokwenza izinto ezithengisayo zokuzithandela wena nabathandekayo.
Sebenza ku-Aquarius. Kuze kube ngo-Juni 7, ukulwa kunye nokucaciswa kobudlelwane kunye namaqabane amashishini aya kuqhubeka. Umzabalazo wobunkokheli kunye nokhuphiswano awupheli. Ngokuqhelekileyo, konke kulungile emsebenzini, nangona kusenokwenzeka ukutshintshela entsha, inomdla ngakumbi. NgoMeyi nasekuqaleni kukaJuni, imiba yentsapho neyendlu ingaphazamisana nomsebenzi.
Abahlobo baka-Aquarius. Ixesha lokunxibelelana nabahlobo kunye nokufumana kubo uncedo olufunekayo kunye nenkxaso kwishishini. Emva koJuni 7, ulwazi olubalulekileyo oluvela kubahlobo luya kufika, ngoko udibana nabo rhoqo. Kulula ukuthetha kunye no-Aries ne-Virgo, nzima kakhulu - kunye neGemini.
Ukuzonwabisa kwiAcarius. Ngaphambi koMeyi 23-24, uhambo olungaphandle kwamanye amazwe lunokwenzeka. Emva koJuni 7, akufuneki ukusebenzisa izithuthi zomhlaba, qaphela ngakumbi endleleni.
I-horoscope ye-horoscope ye-intama yenkunzi yegusha ngoJanuwari
I-Zodiac isayine intombazana
Ikhalenda yaseMpuma, unyaka wenkwenkwe
I-Horoscope yenyanga kaJanuwari, iSagittarius
I-Horoscope yezikali ezizalwe ngonyaka we-tiger
IHoroscope yeengonyama ngomnyaka we-tiger
IHoroscope yama-twins ka-2011
Imemo yabantwana: indlela yokuziphatha elunxwemeni
Izakhiwo zemithi yamayeza abalulekileyo
Imidlalo yezingane evulekile
Indlela elula yokunciphisa umzimba
Kukuphi ukufa okukulindele wena ngokusayinwa kwe-zodiac
Ngaba ndifuna ukuthetha igama "alikwazi" kubantwana
Ukuhlamba iziqhamo zempilo, ubuhle kunye nokuzonwabisa
Ubunzima - ukhetho olufanelekileyo kunye nesicelo
Sichaza iimfihlelo, indlela yokuthanda ngayo kunye nokufunwa
Indlela yokwenza abahlobo abaninzi
Hydrotherapy: izibonakaliso, ukuchasene
Iimfihlelo zamantombazana aphumelelayo
Indlela yokuphucula impilo yakho?
Khetha umenzi wesonka wokuqala
Ngaba isitya sokungafaniyo sinceda ekunyangeni kwe-cellulite?
Intombi endala kunazo zonke iValeria Meladze ibonise isapho esingafanekanga nesapho
Kutheni abantu bathandana, kodwa inxalenye?